Qaar ka mid ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen UNHCR oo Yurub la geeyey – idalenews.com
Qaar ka mid ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Yemen UNHCR oo Yurub la geeyey
Dowladda Dalka Slovakia ayaa u ogolaatay magangalyo KMG oo ay siisay 11-qof oo qaxooti Soomaali ah kuwaasi oo isaga cararay dhibaato ay ku qabeen dalka Yemen waxana lagu soo dhaweeyay magaalo dhacda bariga dalkaasi.
Hay’ada socdaalka caalamka marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa barteeda internetka soo dhigtay in ay dalka Slovakia ay soo gaaren 18-kii bishaan February koox qaxooti Soomaali ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur.
Qaxootigaasi Soomalida ah ayaa waxa ay ahayeen kuwa ka amba baxay dalka Yemen waxana dalkaasi ay uga carareen in ay noqdeen kuwa lagu beegsado dalkaasi kuwasi oo tacadiyo dhanka jinsiga la kulmay taasi oo ku qasabtay in ay dalkaasi ay isaga taagan waxana dadkaasi la sheegay in ay u suurta gali weyday in ay dib ugu soo laabtaan Somalia.
Kooxdaani ayaa noqonaya koox dii 2-aad oo qaxooti Soomaali ah oo magangalyo ay siisay dowlada Slovakia.
Idale News Online,Yemen
Madaxweyne Xasan sheekh oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Switzerland.
Dowladda Soomaaliya oo qorsheyneysa inay dhowaan duulaan cusub ku qaado deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab